Arday heshay deeq waxbarasho oo munaasabad sagootin ah loo sameeyey - Halbeeg News
Arday heshay deeq waxbarasho oo munaasabad sagootin ah loo sameeyey
MUQDISHO(HALBEEG)- Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka ayaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu sagootinayo 223 ardey oo deeq waxbarasho ka helay dowladda Itoobiya.
Munaasabadda ayaa waxaa ka qeyb galay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi raxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabir , Safiirka Dowlada Ethiopia u jooga Soomaaliya iyo Agaasimayaal ka socday wasaaradda waxbarshada Soomaaliya.
Ardaydan ayaa 46 ka mid ah waxay diyaarin doonaan darajada labaad ee Masterka , halka 177 ardayna ay diyaarinayaan heerka koowaad ee waxbarashada Jaamacadda, iyagoo baran doona kuliyadaha kala ahc Caafimaadka, beeraha , IT, Enjineerin, iyo kuwa kale.
Safiirka dowlada Itoobiya u fadiya Soomaaliya Jamaaludiin Mustafa ayaa sheegay in markasta ardayda Soomaaliyeed ay la garab taaganyihiin deeq waxbarasho.
“Markasta waxaan jecelnahay in ay Soomaaliya horumar gaarto, waxaan jecelnahay in ardayda Soomaaliyeed ee wax ku soo barata dalka Itoobta ay sameyaan dadal dheeri ah jaamacaddaha dalka Itoobiya waa jaamacaddo qofka lagu barayo maadooyin adag sidaa darteed waan hubaa in ardayda Soomaaliyeed ee wax ka baranaya dalka Itoobiya ay sameyn doonaan dadal dheeri ah”ayuu yiri danjiraha Itoobiya ee Soomaaliya.
Wasiiru dowlaha wasasaaradda waxbarashada Cabdraxman Jaabir ayaa ardeyda kula dardaarmay inay ka faa’ideystan deeqada waxbarasho ee la siiyay.
“Waa maalin farxadeed, waxaan rabnaa in aan soo celino rajada dhalinyarada Soomaaliyeed,waxaad ku hesheen waxbarashada magaca jamhuuriyada federalka Soomaaliya waxaadna harsaneysaan oo aad ku tageysaan calanka baluuga ah,waxaa lagu keenay deeqdaan waxbarsho hishiis saaxiibtinmo oo ay wada galeen labada dowladood ee Ethiopia iyo Soomaaliya,waxana ugu horeya waxbarashada caafimaadka, amniga iyo habsami u socodka labada doowladood” ayuu yiri wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada .
Wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa horey sidan oo kale horay u dirtay arday Soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka heshay dalalka Suudaan iyo Shiinaha.
Ciidamada AMISOM oo lagu eedeeyey in ay dileen dad rayid ah